Farah My Quinn: Wisata Singapura TempatwisataBizID
Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Marina Bay in Singapore dia nandalo ny fanovana ny Epic ampahany. Raha vao mangina vatana ny rano teo amin'ny fidirana amin'ny Singapore River, amin'io faritra io ankehitriny, mijoro ho toy ny ohatra mahavariana momba ny fomba miniscule firenena ity no tonga eto ho iray amin'ireo tarehy indrindra eran-Travel toerana. Takela-barahina nifanindritsindry ny Financial District, Clarke Quay Civic sy ny afovoan'i District manandrify ny avaratra, Marina Bay sambo sasany malaza indrindra Singapore hotely, trano mijoalajoala, sy ny Attractions. Dia sarotra, tsy miraharaha ny malaza Marina Bay Sands ala nenina koa, ny izay an-trano mihitsy no ho Mitana lisitry ny zavatra lehibe tokony hatao, ka jereo. Ity fizarana ity no mpitarika ny Marina Bay; avy rehetra hotely tsara indrindra ho trano fisakafoanana, miantsena, Nightlife sy Attractions, dia efa nahazo izany rehetra izany! Marina Bay no tsara tarehy sady be pitsiny faritra morontsiraka ny trano fonenana maro Singapore ny tsara indrindra sy malaza Attractions trano. Raha mitsidika Singapore fa saika azo antoka dia ho mandany fotoana sasany manodidina Marina Bay, noho izany dia mora raisina io no nanangona lisitra ho an'ny mpitsidika fameram-potoana voalohany, mba hahafahanao mahita izay ny tsy hanapaka.
Izahay mba nanarona ny zavatra rehetra avy amin'ny zavatra mba hijery ka manaova, izay hihinana sy na dia ny tsara indrindra amin'ny trano fandraisam-bahiny mba matory amin'ny alina. Miaraka kely fotsiny ny preplanning dia afaka mahazo antoka ny hahabetsaka ny fotoana voalohany tao Singapore, fandehanana any amin'ny toerana tsara indrindra sy ny fisorohana ny mpizaha tany matetika fandrika izay afaka manimba ny raha tsy izany andro lehibe. Marina Bay Attractions sy ny fiaraha-mientana manana ny ampy hameno ny diany rehetra mba azo antoka dia tsy ho niraikitra noho ny zavatra tokony hatao. Misy toerana mangatsiaka be ny teboka mba hahazo ny fomba fijery hafa momba ny tanana sy ny entana ny fianakaviana traikefa namana koa. Marina Bay Sands SkyPark tena manome tsirony ny highlife, tamin'ny fijerena Singapore avy any ambony. Hazo lehibe io faritra niravaka amin'ny tampon-malaza Hotel Marina Bay Sands teo an-tsisin'ny tanana seranan-tsambo ny manolotra mari-pahaizana 360-Panorama, ary na inona na inona fa ny taratasy fitaratra sy vitsivitsy tariby eo aminao sy ny fomba fijery. Nipetraka teo amin'ny tampon-goavana, trano fandraisam-bahiny telo-pronged izay overlooks ny helo-drano, ary saika hametraka Singapore eo amin'ny sarintany, Marina Bay Sands SkyPark no iray amin'ireo malaza indrindra Attractions in Singapore satria nisokatra tamin'ny niherina ny folo taona. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid
Posted by Dipo Dwijaya at 11:30 AM